Sidee Tafaariiqlayaashu u Kordhin karaan Ololeyaasha Dhaqaalaha ee Kirismaska ​​si kor loogu qaado Dakhliga | Martech Zone
Xilliga Kirismaska, suuqleyda iyo ganacsatadu waxay kor u qaadi karaan dakhliga si weyn: iyada oo loo marayo suuqgeynta moobiilka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira 1.75 bilyan oo milkiileyaal taleefannada gacanta ah adduunka oo dhan iyo 173 milyan oo Mareykanka ah, oo u dhiganta 72% suuqa taleefannada gacanta ee Waqooyiga Ameerika.
Dukaameysiga qadka tooska ah ee aaladaha mobilada ayaa goor dhaweyd qabsaday desktop markii ugu horeysay 52% booqashooyinka degellada waxaa hadda lagu sameeyaa taleefanka gacanta. Hase yeeshe, macaamilku wuxuu ku sii nagaadaa wakhti ku saabsan dadaallada suuqgeynta sida iimeylku wuxuu noqon karaa ugu yaraan saddex ilbiriqsi. Fahmitaanka khibrada isticmaalaha mobilada ayaa gabi ahaanba muhiim u ah tafaariiqleyda si loo kordhiyo dadaalada suuq geynta iyo kor u qaadida iibka inta lagu jiro xilliga fasaxa.
Adoo mobiil dhigaya bartamaha istiraatiijiyadda omni-channel, dukaamada iyo magacyadu waxay awood u siin doonaan heer cusub oo isdhexgal, hawlgal, wadahadal, iyo daacadnimo. Iyo dakhliga. FitForCommerce
SmartFocus waxay siineysaa xoogaa aragti ah Tilmaamaha Suuqgeynta Mobilka ganacsatada iyo ganacsiyada. Halkan waxaa ah qarsoodi ah 5 ka mid ah talooyinka suuqgeynta moobiilka ee shirkadda.
Tayadoow Mobilada - 30% dadka wax iibsada ee mobilada ka taga waxay ka tagayaan macaamilka khibradooda isticmaale laguma hagaajin karo moobilkooda. Hubso in e-mayladaada ay u muuqdaan kuwo la yaab leh dhammaan barnaamijyada.
Tixgeli Xilliga, Goobta, iyo Dhawaanshaha Macaamiishaada - Faham goorta, meesha, iyo sida ay ugu dhow yihiin macaamiishaada moobiilku markay raadinayaan. Waad la yaabi lahayd inta macaamiil ee aad u soo jiidan karto kaliya iyada oo ku saleysan suuq-geynta macaamiisha iyada oo ku saleysan arrimahan fudud, oo kuu oggolaanaya inaad sida ugu fiican uga faa'iideysato ololayaashaada oo aad ugu dambeyntii u kordhiso iibka.
Ka hortag Bandhigga iyo Fududeynta Qol-qolka Webka - Bandhigga bandhiggu wuu ka yar yahay midka ku habboon marka laga hadlayo iibinta tafaariiqda xilliyada ciidaha. Webrooming (sidoo kale loo yaqaan qolka bandhigga gadaal), dhanka kale waa waxa dhacaya marka macaamiisha ay ku baaraan alaabada internetka kahor inta aysan dukaanka aadin si ay u iibsadaan. Sida laga soo xigtay Forrester Research, webrooming waxay keeni doontaa $ 1.8 trillion oo iib ah illaa 2017, halka iibka ecommerce uu gaaro $ 370 bilyan isla sanadkaas; webrooming waa meesha guuleystayaasha tafaariiqda ee mustaqbalka ku guuleysan doona. Waxaa muhiim ah in loo abuuro dhiirigelin macaamiisha inay ku soo galaan dukaankaaga oo ay dhab ahaantii iibsadaan alaabadaada halkii aad ka heli lahayd khadka internetka ee qiimaha ugu hooseeya ee shabakadda.
Samee Raadinta Moobiilka mid Fudud - 57% macaamiisha moobiilka ayaa ka tagi doona bartaada haddii ay tahay inay sugaan seddex ilbiriqsi inta bog la raacayo. Xaqiiqdii, 100 millisecond kasta oo kordha waqtiga xamuulka waxay hoos u dhigeysaa iibka 1%. Hubso in boggagaagu si dhakhso leh u shuban yihiin isla markaana ay ku habboon yihiin marin-u-helka moobaylka.
Hirgalinta Teknolojiyada Beacon - suuq u dhowaanshaha wuxuu ka ciyaaraa door cusub oo muhiim ah xiritaanka suuqgeynta internetka iyo khad la'aanta iyadoo loo marayo teknolojiyad talo bixin oo la saadaalin karo oo shaqsiyaadka farriimaha suuq geynta u adeegsaneysa shakhsiyaadka adeegsada iyadoo lagu saleynayo goobta ay ku sugan yihiin, habdhaqanka dukaameysiga iyo muuqaalka jirka, iyo macnaha guud ee go'aamada wax iibsiga SmartFocus waa hogaamiyaha tiknoolajiyada beakon waxayna u isticmaashaa inay ku siiso macaamiisheeda aragti qoto dheer oo ku saleysan macnaha guud.
Aragtida buuxda, hubi inaad booqato SmartFocus ' Tilmaamaha Suuqgeynta Mobilka ganacsatada iyo ganacsiyada.
Tags: tikniyoolajiyaddakirismaska ​​wareegaoptimiziation moobiilraadinta moobiilkasuuq u dhowaanshahaqolka bandhigga gadaalbandhigidasmartfocussuuq geynta smartfocuswebrooming
Ololayaasha Multi-Channel B2C Xaqiijinta 24% Soo Celinta Weyn ee Maalgashiga